I-Semalt Expert Ichaza iintlobo ezili-12 zeeWebhsayithi ze-WordPress ongazenzayo kalula
I-WordPress mhlawumbi iyona ndawo inamandla kakhulu yokubhuloza indawo kunye neenkqubo zokulawulwa kwezinto ezikhoyo kwishishini lokuthengisa namhlanje. Kwiminyaka embalwa edlulileyo, i-WordPress yaqala ukufumana ukuthandwa njengesixhobo esifumaneka kakhulu xa sisondela ekudaleni iiblogi. Okwangoku, i-WordPress isetyenziswe ngamashumi amabini abaphuhlisi kunye nabathengisi bezinto zokuthengisa ukudala iiwebhsayithi ezivela kwii-professional sites to blogs - hw4 coils.
Namhlanje, iintengiso zeendaba, iiblogi ezithandwayo, kunye newebhusayithi yomculo zisebenzisa i-WordPress ukubetha i-market target target. Kwi-shishini lokuthengisa, ii-WordPress iziza zibekwe njengezona zilungileyo.
U-Oliver King, onguchwepheshe ophezulu Semalt , unika apha uluhlu lweentlobo ezili-12 zewebhusayithi ongazenza kalula usebenzisa i-WordPress.
1. I-website yezorhwebo
I-WordPress iqukethe iplagi epheleleyo kunye neengqungquthela eziphezulu zokudala i-website efanelekileyo yezorhwebo. Iwebhusayithi ye-E-commerce eyenziwe nge-WordPress iqulethe iimpawu ezibalulekileyo ezenza abahwebi bakwazi ukulawula iimpahla kunye nokongeza iinqwelo zokuthenga. Izaziso ze-WordPress nazo ziququzelela ukuthumela ngokukhuselekileyo nokufumana iintlawulo ngeziko.
2. Iiforamashishini zoshishino
Ngaba usebenza ekudaleni uhla lwemashishini? I-WordPress yinto efanelekileyo kakhulu kuwe. Sebenzisa i-WordPress ukwakha iwebhusayithi ye-style ye-shishini kwaye fumane ithuba lokuongeza iinkcukacha zakho zezoshishino kunye ne-intanethi kwi-website yakho. Iziza ze-WordPress zivumela iindwendwe ukuba zenze uphando ngeloluhlu lwamashishini.
3. I-website ye-Wiki-style
Phatha ngokufanelekileyo umxholo wakho ngokudala iwebhusayithi yakho usebenzisa i-WordPress. Ngokuqhelekileyo eyaziwa njengewebhsayithi yolwazi, iiwebhsayithi ze-wiki zidinga ukuxhumeka kwangaphakathi kumaphepha afumanekayo kunye nezikhundla. I-WordPress inika abaphengululi ithuba lokuhlukanisa umxholo ngokusebenzisa amathegi kunye neendidi.
4. Uluntu olusekelwe kwi-intanethi
Sebenzisa i-WordPress ukwakha uluntu lwakho lwe-inthanethi olusekelwe kwisihloko owazi kakuhle. Fumana ithuba lokuxelela umxholo wakho kunye neendwendwe. Sebenzisa uluhlu lweendwendwe ukudala uluhlu lwee-imeyile eziphawula kumxholo wakho..Iziza ze-WordPress zivumela iindwendwe ukuba zenze izimvo kwiziko lakho loluntu kalula.
5. Iiwebhsayithi zemfundo
Sebenzisa i-WordPress ukudala iwebhusayithi yezemfundo kwaye ufumane ithuba lokuongeza izixhobo ezinxulumene neengcali ezahlukeneyo. Ukubonelela ootitshala nabaphengululi ngeenkcukacha zokungena ngemvume ukuze zilawulwe lula kwaye zongeze umxholo onobungakanani kwiziko lakho.
6. Iwebhusayithi yokuthengisa yokusebenzisana
Iiwebhusayithi zokuthengisa ezinxulumene nazo ziyaziwa ngokubanzi kwiiwebhusayithi ezidibeneyo. Ngokudala iiwebhusayithi ezidibeneyo kunye neWindowsPress, unokufumana iidola ezingaphezulu ngokuqhuba i-traffic yangempela kwisiza sakho. Inani elithile leendwendwe lingaphetha ukuthenga iimveliso ezixutyushwa kwizithuba zakho.
7. Iwebhusayithi yesikhundla se-Portfolio
Yenza imikhiqizo yakho, uyilo kunye nobugcisa kukuthetha nawe. Izaziso ze-WordPress ziquka iindatshana kunye nempawu ezinika abaculi ithuba lokubonisa amandla abo kwiindwendwe.
8. Ibhodi yomsebenzi woluntu
Sebenzisa i-WordPress ukudala ibhodi yomsebenzi kwi-intanethi apho abathengi banokuthumela khona kwaye bafumane imisebenzi ngokulula. I-WordPress iiwebhusayithi zilula ukulawula nokuzilungisa.
9. I-website-based website
Yenza iwebhusayithi yezithombe usebenzisa i-WordPress ukuba ujonge ii-Wiral kunye ne-Pingraphy kwiwebhusayithi yakho. Layisha iifoto kwikhasi lakho lasekhaya ngaphandle kokuhlangabezana neziphene zobugcisa.
10. Iwebhusayithi yezoshishino
Khetha kwiindidi ezahlukeneyo nakwiindidi kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress kwaye ulawule umda ukuze uhambelane neenkcukacha zakho zebhanki.
11. Ibhulogi iwebhusayithi
I-WordPress inendima ebalulekileyo ekuphumeleleni kwewebhusayithi yeblogi. I-WordPress iziza zingaphuhliswa ngumntu ofuna ukufumana iwebhusayithi.
12. Iindaba zewebhu kunye neeMagazini
Ukwenza abafundi beetyeleli kunye nabathengi abanokukwazi ukufumana umxholo wakho konke okubalulekileyo xa udala iwebhusayithi newebhsayithi. Izaziso ze-WordPress zinika iindwendwe ithuba lokupapasha iindaba eziphezulu.
I-WordPress yindlela efanelekileyo yokuthengisa abathengisi kunye neengxelo zengxelo zenkampani ezisebenzayo ekuqhubeni ukuhamba kweewebhu. I-WordPress inezihloko ezaneleyo, iifowuni, kunye neendidi zokukhetha. Ukuba usebenza ekwakheni iwebhusayithi, i-WordPress yindlela efanelekileyo yokuyiqwalasela.